Booliska Faransiiska oo dhibaato ku haya muhaajiriin dhawaan xeryahooda qaxootiga laga xiray | Somaliska
Booliska Faransiiska oo dhibaato ku haya muhaajiriin dhawaan xeryahooda qaxootiga laga xiray
Ciidamadda Fransiiska ee dhawaan albaabada iskugu dhiftay xeryo ku yaala Calais ee gacanka Ingiriiska, ayaa haatan bilaabay ineey ku raad joogaan muhaajiriintii xeryahaasi ku jiray kuwaas oo iminka hooy u ah buundooyinka hoostooda iyo goobaha tareenadu maraan ee ku yaala waqooyi bari ee caasimadda Paris.
Muhaajiriintan oo si sharci darro ah ku dagay meelo badan oo ka mid ah Paris, ayaa booliska waxaa ay bilaabeen ineey ka kaxeeyaan kuwas oo habeenaddii u ah hooy. Duqa magaaladda Paris oo fulinaya amar uu soo saaray wasiirka arrimaha gudahaBernard Cazeneuve, ayaa ku amray ciidamadda in muhaajiriinta halkaasi ka dhigtay hooy laga kala eryo. Tanina waxaa ay walaac ku abuurtay qaxooti badan oo la’ meel ay u ciirsadaan islamarkaasina daadsan magaaladda
Tan iyo markii dhawaan albaabada la iskugu dhiftay xerradda loogu magac darray Jungel ee ku taala Calais ee dalkaasi, ayaa qaxooti gaaraya 1.500 oo u badan dhalinyarro iyo carruur ayaa waxaa ay hooy ka dhigteen konteenaro yaala halkaasi. Faransiiskuna waxaa uu sheegay inuu doonayo in muhaajiriintaas ay la wareegto dowladda Ingiriiska. Muhaajiriintan ayaa sidoo kale rajo ka qaba ineey ka gudbaan kanaalka u dhaxeeya labadda dowladood.
Faransiisku waxaa uu ka mid yahay dalalka ay muhaajiriin badan ay ku soo qul quleen kuwaas oo qeyb ka ah qaxootiga qaaradda ku soo jabay.
gargaar eysan fileen allaha tuso 😍
ilaahay aya caawin masakinta waad dareemikarta qof aan haysan guri
ilaahay aya caawin masakinta waad dareemikarta